Amagobolondo Ezilwane Zasolwandle | Ingabe Kwaklanywa?
AMAGOBOLONDO ezilwane zasolwandle enza zikwazi ukuhlala ezindaweni okunzima ukuhlala kuzo, futhi enza zikwazi ukumelana namandla olwandle nezinto ezikulo. Indlela la magobolondo avikela ngayo izilwane ezihlala kuwo, yenze onjiniyela bacwaninga ngokwakheka kwawo, ngoba befuna ukwenza izimoto nezakhiwo ezikwazi ukuvikela abantu.
Cabanga ngalokhu: Onjiniyela bacwaninga izinhlobo ezimbili zamagobolondo—avulekayo kanye nasongolozelayo acije phezulu.
Emagobolondweni avulekayo, onjiniyela bathola ukuthi amazenge awo angaphandle enza ukuba into ecindezela igobolondo iye ngasemaphethelweni alo, noma ohlangothini lwegobolondo olungavuleki. Ngakolunye uhlangothi, ukugoba kwegobolondo elisongolozelayo, kwenza ukuba into elicindezelayo iye ohlangothini lwalo oluphezulu olubanzi, lapho liqine kakhulu khona. Zombili lezi zinhlobo zamagobolondo zakheke ngendlela yokuthi into ewacindezelayo iye lapho amagobolondo eqine kakhulu khona. Lokhu kwenza ukuthi isilwane esingaphakathi sivikeleke.
Abacwaningi baphinde baqhathanisa ukuqina kwamagobolondo angempela nokwalawo ababezenzele wona nge-computer. Kwatholakala ukuthi amagobolondo angempela ayenamandla aphindwe kabili okumelana nesisindo, uma kuqhathaniswa nalawo okuzenzela.
Ngesikhathi iphawula ngokuthi lolu cwaningo lungaba usizo kuphi, i-Scientific American yathi: “Uma ngelinye ilanga uzithola usushayela imoto emise okwegobolondo, kuyoba imoto enhle futhi ekwaziyo ukuvikela imizimba ethambile yabagibeli.”
Ucabangani: Amagobolondo ezilwane zasolwandle azivelela yini noma aklanywa?
Thumelela Thumelela Amagobolondo Ezilwane Zasolwandle